စတိဗ်ဂျော့ဘ် - သူတို့ကိုစားပါစေ။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 16, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်သည် Apple ကီးဘုတ်၊ Apple MacBookPro နှင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ Apple Cinema Display၊ ကျွန်ုပ်၏ Apple mouse စက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Apple ဝါသနာအိုးလို့မခေါ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့အရည်အသွေးကကျွန်တော့်အမြင်အတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ပဲ။
၄ င်းတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏လှပမှုသာမကဘဲ Apple တီထွင်ကြံဆမှုဟာအမြဲတမ်းခြေလှမ်းတစ်လှမ်းနှင့်အခြားလူအားလုံးထက်တစ်ဆင့်ပြီးတဆင့်ဆန်းကြယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ Apple နဲ့ PC ကြော်ငြာတွေကရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သို့သော်သူတို့သည်စနစ်များအကြားမယုံနိုင်လောက်အောင်ကွာဟချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်တူညီကြသည်။
Steve Jobs သည်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးပြီးပြည့်စုံသော Apple အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆန်းကြယ်မှုတို့ကို Apple iPhone4ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် တခြားဖုန်းလိုပဲဖော်ပြထားသည်မှာ၎င်းသည် iPhone4နှင့်မတူပါ။ သင် Youtube ကိုသွားပြီး Nokia ဖုန်းများနှင့် Motorola ဖုန်းများအတူတူပင်ကြည့်နေသည်။"
ဝိုး။ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်တွင်စကားလုံးပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့်စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကကျွန်ုပ်သည် Apple အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထပ်တူထပ်မျှရှာဖွေသည့်အရေးအကြီးဆုံးစကားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထူးခြားသော။ ငါ့သမီးကိုအိုင်ဖုန်းတစ်ခုဝယ်ပြီး ၄ င်းရဲ့ငွေတောင်းခံလွှာကငါ့ရဲ့ Verizon (Droid) ဥပဒေကြမ်းထက် ၃၀% ပိုများတယ် ထူးခြားသော ငါပေးဆောင်ခဲ့အတိအကျဘာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထူးခြားတဲ့အဘို့အပိုပေးဆောင်စိတ်ထဲမထားဘူး ...
Apple ခဲ့ ထူးခြား ဒီနေ့အထိ အခုသူတို့ကတခြားထုတ်လုပ်သူပဲ သူတို့မှာပြaနာရှိမှန်းသိတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်မာနထောင်လွှားခဲ့ကြသူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဂျော့ဘ်စ်က Bloomberg သတင်းစာသည်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ အက်ပဲလ်သည်အမှန်တကယ်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သနည်းဟူသောမေးခွန်းပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
ဒီတော့ဒီနေ့ဂျော့ဘ်ကလူအများစုကိုအဖြေပေးသလား။ “သူတို့ကိတ်မုန့်ကိုစားကြပါစို့“ သူကဒါကိုတကယ်မပြောခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သိပ်နီးကပ်တယ်၊
Tags: ပန်းသီးiphone 4Steve Jobs
17:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 04
အိုအိုး၊ ငါသူပြောတာတောင်ငါတောင်မှမသိခဲ့ဘူး၊ ဟေးလူတိုင်းကငါတို့ထုတ်ကုန်အတွက်နှစ်ဆပေးရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ပစ္စည်းပစ္စယနဲ့အတူသင်ထုတ်ကုန်အတွက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူး၊ အိုး, ငါတို့စဉ်းစား, ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားလူတိုင်းလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံကိုငါတို့သိမ်းထားမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
17:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 05
ဘေးထွက်မှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသင်စားသည်ဖြစ်စေ၊ သောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏နောက်ဆုံးဘလော့ဂ်အနည်းငယ်သည်ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးများထဲမှအချို့ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
17:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 36
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပက်ထရစ်! ကြင်နာသောစကားလုံးများကိုအမှန်ပင်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ ငါတကယ်အစာအိမ်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေပြီ။ တစ်နေ့လုံးကြွေပြားလေးတစ်လုံးထဲမှာထိုင်နေရင်ငါပိုကောင်းမယ်ထင်လိမ့်မယ်။ : - [
22:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 04
ငါ "ထူးခြားတဲ့" ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားရဲ့စကားကိုငါသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီတိုးတက်မှုတစ်ခုက Apple ကိုကျန်တဲ့မျောက်တွေရဲ့စည်ထဲကိုထိုးကျသွားတာကိုမင်းရဲ့သဘောမတူဘူး။ ဒါဟာအင်တာနာကြောင့် Apple အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ပြောတာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။
အိုင်ဖုန်းသည်ပထမဆုံး Motorola အုတ်ခဲဖုန်းနှင့်ဆင်တူမှုများစွာရှိသည် - နံပါတ်များ၊ သော့များ၊ အင်တင်နာသေးငယ်သောပရိုဆက်ဆာများ၊ သို့သော်ခြားနားချက်မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် software ဖြစ်သည်။ ဒီ antenna က iphone ဟာရာနဲ့ချီတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့စာအုပ်၊ လွှဲပြောင်း (ဂိမ်းများ)၊ ustream စက်ပစ္စည်းတွေ၊ အသံကျယ်ကျယ်အော်ဟစ်ဖို့အတွက်ရေပုံးဘောင်းဒါမှမဟုတ်အဆင့်တောင်မရှိတာကိုမဖယ်ရှားပေးပါဘူး။
ထူးခြားမှုအတွက်နာမည်ကောင်းနှင့် Next Big Thing အတွက်လိုအပ်မှုသည်အစကန ဦး ရောင်းအား၏ ၂၀% ကိုရရှိနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အသွင်ပြောင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်မည်ဟူသောကတိကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သွားစေသည်။ အင်တင်နာပြissuesနာရှိသည့်အခြားစမတ်ဖုန်းအားလုံးသည်နောက်လိုက်များဖြစ်သည်။